Redmi K20 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Redmi K20 Pro: Nke mbụ dị elu nke ika
Izu ole na ole gara aga e gosipụtara ngosipụta nke Redmi K20, nke a na-atụ anya na ọ ga-abụ njedebe dị elu nke akara ngosi China. Ọ bụ ezie na ụbọchị ole na ole gara aga, ekpughere ya na a ga-enwe ụdị abụọ. Otu maka ufọt ufọt nso na onye ọzọ elu-njedebe. E gosipụtalarị ha abụọ. Modeldị njedebe dị elu bụ Redmi K20 Pro, ekwentị mbụ nke ika a nke ahịa a.
E gosipụtara Redmi K20 Pro dị ka ama dị ike. Ọzọkwa, dị ka ọ na-ehi eri n'oge gara aga, abịa na a slide-esi n'ihu igwefoto, otu n'ime ọnọdụ nke afọ a na gam akporo, nke anyị na-aga n'ihu na-ahụ n'ọtụtụ ụdị. N'akụkụ azụ ya ọ ga-abịa na igwefoto atọ.
N'ụzọ nke a, anyị nwere ike ịhụ na ihuenyo ngwaọrụ na-ewe ọtụtụ ihu. A na-egosipụta ya na ihuenyo nwere okpokolo agba pere mpe ma na-enweghị ọkwa ma ọ bụ oghere na ya. Ya mere, njedebe a dị oke nso na echiche ihuenyo niile, nke anyị na-ahụwanye na ahịa.
Emeela Redmi 7A
1 Nkọwapụta Redmi K20 Pro
Nkọwapụta Redmi K20 Pro
Redmi K20 Pro a bụ akara maka akara na njedebe dị elu. Ruo ugbu a, a hapụrụ anyị n'ụdị dị ala na nke etiti. Maka ekwentị mbụ a dị elu, ha etinyebeghị ihe egwu. Ike kachasị, igwefoto dị mma, imepụta ọgbara ọhụrụ na njikọta dị iche iche. Ihe a niile nwere uru maka ego ole na ole nwere ike inye. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,39-anụ ọhịa AMOLED na FullHD + na 2.340 x 1.080 pikselụ na Ratio 19.5: 9
Nchekwa ime: 64/128/256GB
Rear igwefoto: 48 MP nwere oghere f / 1.75 + 13 MP nwere oghere f / 2.4 Super Wide Angle + 8 MP nwere oghere f / 2.4 telephoto
Igwe n'ihu: 20 MP
Usoro njikwa: Akara 9 Android na MIUI 10
Batrị: 4.000 mAh na 27W Fast Charge
Njikọ: 4G, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth 5.0, GPS abụọ, USBdị USB C, 3,5 mm Jack
ndị ọzọ: Mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo, NFC, Kpọghe ihu
Akụkụ: 156,7 x 74,3 x 8,8 mm
Bet na-etinye aka na ihuenyo 6,39 nke anụ ọhịa na ekwentị ahụ, ya na AMOLED panel na ya. Maka onye nhazi ahụ, dịka e kwuru ọnwa ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ ahọrọla ike kachasị ike na ahịa dị na ya, yana Snapdragon 855 ịbụ onye ahọrọ. Ọ na-abịa na nchikota dị iche iche nke RAM na nchekwa, nke mere na onye ọrụ ọ bụla ga-enwe ike ịhọrọ nhọrọ kachasị amasị ha. Batrị nke Redmi K20 Pro a nwere ezigbo ikike nke 4.000 mAh. Na mgbakwunye na ihe nhazi na gam akporo, anyị ga-enwe ezigbo nnwere onwe.
Igwefoto bụ ihe ọzọ n'ime ike ya. Igwefoto azụ atọ, 48 + 13 + 8 MP, nke na-abata kwadoro site na ọgụgụ isi. Ha na-ekwe ka anyị were ọmarịcha foto n ’ụdị ọnọdụ niile. Maka igwefoto n'ihu ika ahụ na-eji otu ihe mmetụta 20 MP. Ejikọtara ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo ekwentị, ebe anyị na-ahụ ọtụtụ ihe na njedebe dị ugbu a. Anyị nwekwara mmeghe ihu na ya, na mgbakwunye na NFC maka ịkwụ ụgwọ ekwentị, ihe na-adịghị ahụkebe n'ọtụtụ ekwentị ndị China.
Emegoro Redmi K20 Pro na China. Dị ka ọ na-eme n'oge ndị ọzọ, a kwadoro nkwalite ya na China, mana n'oge ahụ enweghị ihe ekwuru banyere mbido ya na ahịa ndị ọzọ. Asịrị ka na-akọ banyere ịhapụ mba ụwa ka ọ bụrụ Pocophone F2. Ọ bụ ezie na ruo ugbu a enweghị nkwenye na nke a.
Anyị nwere ike ịzụta ya na agba atọ, nke na-acha uhie uhie, na-acha anụnụ anụnụ na nke ojii na carbon eriri imecha. Banyere nsụgharị, Redmi K20 Pro bịarutere na nchikota nke RAM na nchekwa dị n'ime. Ọnụahịa ha na China bụ ndị a:
Ihe nlere anya nke 6 / 64GB di na 2.499 yuan (ihe dika 323 euro ịgbanwe)
Versiondị nke nwere 6 / 128GB na-akwụ 2.599 yuan (ihe dị ka euro 336 ịgbanwe)
Versiondị nke 8/128 GB dị ọnụ na 2.799 yuan (ihe dị ka euro 362 ịgbanwe)
Ihe nlere anya nke 8/256 GB na-efu 2.999 yuan (ihe dị ka euro 388 iji gbanwee)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Redmi K20 Pro: Nke mbụ dị elu nke ika
Redmi K20: Uzo di elu nke akara a di ugbu a
Tupu nkwupụta ngosi ya, Amazon na-etinye Moto Z4 n'ahịa